कोको बने घरबसेरै लखपतिः बर्दीयाका लाल चौधरी देखि धादिङकी कृति इटानेसम्म !
You are at:Home»Uncategorized»कोको बने घरबसेरै लखपतिः बर्दीयाका लाल चौधरी देखि धादिङकी कृति इटानेसम्म !
By Aakhi Jhyal on २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार Uncategorized
काठमाण्डौँः नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा नौलो प्रयास थियो ‘को बन्छ करोडपति’ कार्यक्रम । सपना साकार भयो नेपालीहरुकोः आफ्नै आँगनमा आफ्नै भाषामा विश्वप्रसिद्ध टेलिभिजन शोको स्वाद लिइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा करोडपति सुन्नेबित्तिकै ‘ओ हो यो त ठूलाबडाको लागि हो’ जस्तो पनि लाग्यो नेपाली दर्शकहरुलाई । तर भारतीय सँस्करणको ‘कौन बनेगा करोडपति’ हेर्दै हुर्केका दर्शहरु जब आफै महानायक राजेश हमालसँग हटसिटमा पुगेः या घर बसेरै आफै लखपति भएको खबर सुने त्यसपछि मात्रै यो मञ्च सबै नेपालीहरुको मञ्च हो भन्ने प्रमाणित भयो ।
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार 0
युवती संघको धम्कीः ‘दाई नभन्नु ल …’ भन्ने गीत प्रतिबन्ध लगाइयोस् !